Olee otú Idozi Broken iPhone Nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nhọrọ idozi Broken iPhone
nyochaa 0 elu 0
Mgbe ị kwesịrị idozi gị gbajiri iPhone, ị nwere ihu ọma 5 nhọrọ:
N'okpuru akwụkwọ ikike: Ọ bụrụ na gị iPhone bụ n'okpuru akwụkwọ ikike, ọ pụtara na ị nwere ohere iji nweta gị agbajikwa iPhone rụziri for free, ma ọ bụ ọbụna ịgbanwee gaa na ọhụrụ otu maka free. Nke a nanị na-eme mgbe gị iPhone bụ ndiiche ruru ụfọdụ ọrụaka nsogbu.
Mee Jiri nke AppleCare: AppleCare maka iPhone gbatịrị gị mkpuchi afọ abụọ si mbụ zuo ụbọchị gị iPhone na-agbakwụnye na ruo abụọ mere nke mberede mmebi mkpuchi.
Olee otú Dochie iPhone Battery
Mgbe gị iPhone ndụ batrị-aghọ ndị ọzọ njọ ma ọ bụ i nwere ike ghara inwe ya ebubo, i kwesịrị dochie nke ochie iPhone batrị na onye ọhụrụ. Ọ na-ewe gị 6-10 nkeji iji nweta ya mere site onwe gị. Ị dị nnọọ mkpa ịzụta batrị nnọchi, ụfọdụ ngwá ọrụ na-eso video nkuzi iji dochie batrị.
Olee otú ịrụzi Your Tiwara Etiwa iPhone ihuenyo
N'ozuzu-ekwu okwu, mgbe gị na iPhone 5 ma ọ bụ 5S ihuenyo gbajiri, ị chọrọ iji dochie kụrisịa ihuenyo na onye ọhụrụ. Echegbula onwe gị banyere otú imezu dị otú ahụ a mgbagwoju anya ọrụ. Ị dị nnọọ mkpa ịzụta ọhụrụ na ihuenyo, ụfọdụ ngwá ọrụ na-eso a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi.
Ọ bụ nnọọ manụ mgbe gị iPhone Home button bụ rapaara ma ọ bụ na-adịghị anabata. Ezie na iOS 7, AssistiveTouch na-enye gị ka omume ọma Home button, nke ọrụ ahụ dị ka onye na-na gị iPhone, mgbe ụfọdụ, ị ka chọrọ pịa Home bọtịnụ. Na nke a, i nwere ike igosi DIY dochie iPhone Home button site onwe gị.
Olee otú ịrụzi iPhone Ike Button
Mgbe Ike (mkpọchi) button na gị iPhone adịghị arụ ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-akwụsị na-eji gị iPhone, n'ihi na unu ghara inwe ike gị iPhone unlocked. Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-eso a nkuzi ma idozi iPhone Ike bọtịnụ ma ọ bụ dochie nke ochie Ike button na onye ọhụrụ.
Ọ bụrụ na gị iPhone n'azụ igwefoto mebiri emebi, kama nke na-ezipụ ya ka a Obodo idozi ụlọ ahịa, m atụ aro ka ị na-eji dochie mebiri emebi n'azụ igwefoto site onwe gị. Ọ bụ nnọọ mfe. Naanị na ọtụtụ mfe nzọụkwụ, ị nwere ike wepu mebiri emebi iPhone n'azụ igwefoto na-edebe onye ọhụrụ.
Mgbe gị iPhone esịtidem ọkà okwu na-emezughị na-arụ ọrụ, ị nwere ike gbanyụọ Cellular na Bluetooth ka ego ma ọ na-arụ ọrụ ọzọ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, nke earpiece ọkà okwu nwere ike mebiri emebi. Na nke a, ị kwesịrị ị na-eji dochie ochie earpiece ọkà okwu na onye ọhụrụ.
Olee otú Dochie iPhone 4 / 4S Broken ihuenyo
Chọrọ dochie gbajiri agbaji ákwà ngebichi nke gị iPhone 4 ma ọ bụ 4S na onye ọhụrụ, ma chọta onye ọ bụla nke nhọrọ osobo gị chọrọ? Na nke a, i nwere ike na-amasị na-agbalị ya site onwe gị. Video Nkuzi na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nduzi ga-enyere gị aka inwe site na proces.